Sawiro+Dhageyso Xabaal Wadareed Laga Helay Duleedka Mandheere. – Bogga Calamada.com
Sawiro+Dhageyso Xabaal Wadareed Laga Helay Duleedka Mandheere.
July 4, 2017 4:19 pm Views: 278
Dad Xoola-dhaqato ah oo ku sugan deegaanka Bambo ee taabacsan Mandheera ayaa meydadka ilaa shan ruux oo Muslimiin ah ka soo saaray Xabaal-wareed aad u dheer oo ay ka heleen deegaano ka tirsan gobolka sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka iyo qaar ka mid ah ehelada dadka la laayey.
Meydadka la helay ee shanta ah ayaa kala ah afar rag ah iyo hal dumar ah oo la la’sanaa tan iyo todobaadkii la soo dhaafay sida ay sheegeen eheladooda.
Aroornimadii hore ee shaley oo isniin ahayd ayaa meydadka dadkan la geeyey Isbitaalka deegaanka Lafey ee hoosyimaada degmada Mandheera halkaas oo eheladooda ay ugu yimaadeen. sidaas waxaa sheegay Wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa Kenya.
Dil iyo Dal-Dalaad
Qof ka mid ah shaqaalaha Isbitaalka ayaa Daily Nation u sheegay in hal nin oo ka mid ah dadka la dilay uu jirkiisa ka muuqday rasaas, lagana toogtay qeybaha sare ee jirka, afarta ruux ee kalena la dal-dalay oo uu qoortooda ka muuqdo xariggii lagu daldalay.
Dhamaan dadka la dilay waxay ka soo jeedaan deegaan lagu magacaabo Fino, waxaase meydadkooda laga helay deegaan lagu magacaabo Warankara oo qiyaas ahaantii 65km u jirta Fino oo ah meesha markii hore laga soo afduubtay ka hor inta aanan la dilin ee aan xabaal-wareedka lagu tuurin.
Abdi Aadan oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in uu aqoonsaday mid ka mid ah meydadka oo ahaa walaalkiisa, kaas oo la waayey jimcihii la soo dhaafay, ayna tan iyo markaas raadinayeen balse ugu dambeyntii la helay isagoo meyd ah.
Wuxuu sheegay in uu Aaminsan yahay in walaalkii ay qafaasheen ciidamada Amaanka ee Kenya intii lagu gudajiray raaf ay ciidamadu ka geysteen deegaanka Fino ee taabacsan Mandheera.
Cadow Nagu dhexjira
“Waxaa jiray howlgalo amni oo ciidamadu ay ka wadeen Fino, Anaguna waxaan u badineynaa in walaalkey iyo dadka lala helayba ay qafaasheen, sidoo kalena dileen ciidamada Amaanka ka hor inta aysan halkan ku aasan” ayuu yiri Cabdi Aadan.
Mas’uuliyiin u hadashay maamulka dowlada saliibiga ah ee Kenya u jooga Mandheera ayaa difaacay ciidamada Amaanka ee Kenya, Iyagoona farta ku fiiqay wax ay ugu yeereen ‘Cadow Nagu dhexjira’ balse dadka deegaanku waxay si shaki la’aan ah u aaminsan yihiin dadkaas ay laayeen ciidamada gaakada Kenya.
Jimcihii la soo dhaafay, meydadka laba ruux oo kale ayaa laga soo saaray Xabaal-wareed laga helay meel u dhow xad-beenaadka kala qeybiya Kenya iyo Soomaaliya gaar ahaan bariga Mandheera, Waxaana dadka deegaanku ay sheegeen in labadaas ruux la waayey todobaadyo ka hor, tan iyo markaasna la raadinayey.
kuwo kale ayaa horay u dhacay
Gudoomiye ku xigeenka Mandheera oo lagu magacaabo Cumar Maalim ayaa si kulul u cambaareeyey falkan, balse isagoo aanan si toos ah farta ugu fiiqeynin Kenya ayuu dowlada ugu baaqay in ay si deg deg u dabagasho arintan si loo soo qabto dambiilayaashii ka dambeeyey.
“Ma dooneyno in maalin waliba sidan oo kale aan ku weyno dadkeena, Waxaan ugu baaqayaa dowlada in ay cadeyso arintan iyo sida ay wax u dhaceen, ma ahan tani oo kaliya, kuwo kale oo badan ayaa horay u dhacay” ayuu yiri Cumar.
Boorka La Dagaalanka Agigixisada
Arintan ma ahan mid ugub ku ah gobolka NFD ama waqooyi-bari ee ku hoosjira gumeysiga dowlada saliibiyadda ah ee Kenya, mana ahan sidoo kale mid ku cusub dhamaan deegaanada ay Muslimiintu leeyihiin ee dalkaas xitaa hadey tahay Lamu iyo Mombasa.
Hay’adda HRW iyo hay’ado maxali ah oo laga leeyahay gudaha Kenya ayaa dhowrjeer goboladaas ka soo calaamadeeyey Afduubyo, dilalka qorsheysan iyo Raaf ka dhan ah Muslimiinta oo ay geysanayaan ciidamada gaalada Kenya, iyagoo dadka ugu soo gabanaya boorarka beenta ah ee uu ka mid yahay la dagaalanka argigixisada.
Waxay sidoo kale sheegeen in dad badan oo ciidamadu ay ka soo afduubteen guryahooda ugu dambeyntii laga helay Xabaal-wareedyo ku yaalla deegaanada NFD ee ku hoosjira gumeysiga saliibiga.
Halkan Ka Dhageyso Warbixinta Xabaal Wadareedka La Helay.
Hoos Ka Daawo Sawirada Meydadka Muslimiinta ee Laga Helay Xabaal-Wareedyada NFD
Inshaallah XARAKATU SHABAABUL MUJAAHIDIIN.Weey u aari doonaan dadkaas walaalaheena eey laayeen kufaartaas Keenyaatigaa